विनायकलाई प्याब्सक कप फुटसलको उपाधि – Khel Dainik
विनायकलाई प्याब्सक कप फुटसलको उपाधि
काठमाडौं (खेलदैनिक) । विनायकले चौथो प्याब्सक कप अन्तरविद्यालय छात्र फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
निजी तथा आवसीय विद्यालय संगठन काठमाडौं (प्याब्सक) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा विनायकले विट्स एकेडेमीलाई ६–२ गोलले हरायो । विनायकका ‘म्यान अफ द म्याच’ स्कन्द पोखरेलले ४ गोल गरे । सतिश थापा र नितिश सहनीले १–१ गोल थपे । विट्स एकेडेमीका साम्देन तामाङ र रिसोप प्रधानले १–१ गोल फर्काए ।
विजेतालाई प्रदेश सांसद् नरोत्तम वैद्य, आयोजक प्याब्सकका अध्यक्ष गेन्द्र लामा, लुम्बिनी एकेडेमिक फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक रविचन्द्र कोइराला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल, एन प्याब्सनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रताप थापालगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । तीनदिने प्रतियोगितामा ६४ टिमले नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
← माल्दिभ्समा अभिषेकको चार गोल स्टार सिटीलाई फारवेष्ट पशुपति कपको उपाधि →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ २५, २०७६
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ २५, २०७६
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ २५, २०७६
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ २५, २०७६
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ २५, २०७६
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ २५, २०७६